La Niña onu na ya pụta, ihe ọ bụ? | Network Meteorology
Ọ na-esiwanye ike na fenómeno Nwata nwanyi, dị ka ekpughere na akụkọ NOAA, mana gịnị ga-eme na ihu igwe a? Kedụ nsonaazụ ndị anyị ga-eche ihu na ọnwa ndị na-abịanụ?
El Niño ji nwayọọ nwayọọ na-ada mbà, nke a bụ ezigbo akụkọ na-atụle na ọ bụ nke kachasị njọ n'oge a, mana anyị nwere ike ọ gaghị enwe ọ haveụ n'oge na-adịghị anya. La Niña nwere ike ịkpata ọdachi ndị na-emere onwe ha.
1 Gịnị bụ ihe La Niña?
2 Ihe si na La Niña pụta
Gịnị bụ ihe La Niña?
Ihe ịtụnanya La Niña bụ akụkụ nke usoro ụwa niile a maara dịka El Niño-Southern Oscillation (Ọzọkwa). Nke a bụ okirikiri nke nwere usoro abụọ: nke dị ọkụ nke a maara dị ka El Niño, na nke oyi, nke bụ nke ahụ, na puru omume niile anyị ga-enwe n'ọnwa na-abịanụ nke a maara dịka La Niña.
Nke a na - amalite mgbe ikuku ikuku na - asọsi ike site na ọdịda anyanwụ na - eme ka ikuku ikuku ikuku belata.
Mgbe nke ahụ mere, a gaghị egbu oge nsonaazụ ya n'ụwa niile.
Ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na ihe a bụ ihe ndị a:
Mmiri mmiri ozuzo na-eto na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, akụkụ ụfọdụ nke Africa, Brazil na Australia, ebe idei mmiri ga-adịkarị.
Ugboro oke ikuku na oke ifufe na United States na-abawanye.
Snowfall nwere ike ịbụ akụkọ ihe mere eme n'akụkụ ụfọdụ nke US.
A ga - enwe oke mmiri ozuzo na ọdịda anyanwụ America, na Ọwara Oké Osimiri Mexico, nakwa n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ Africa. Ọnọdụ okpomọkụ dị na ebe ndị a nwere ike ịdịtụ ala karịa ka ọ dị na mbụ.
N'ihe banyere Spain na Europe n'ozuzu, mmiri ozuzo nwere ike ịbawanye ụba.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ihe si na La Niña pụta
Ibe akwukwo a adighi nma n’ime onyonyo nke n’egosiputa na obu oria nwayi a ebe obu na o na eme ka unwu karie mmiri dika m ghotara ya, lee wikipedia
Zaghachi samuel giraldo mejia
Spain bụ mba Europe nke okpomoku ụwa kacha emetụta